ရန်ကုန် ရေပေးရေး ထိရောက်ရန် ဂျိုးဖြူ ကန်ရေချိန် လုံလောက်ဖို့လို
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း > ရန်ကုန် ရေပေးရေး ထိရောက်ရန် ဂျိုးဖြူ ကန်ရေချိန် လုံလောက်ဖို့လို
ရန်ကုန် ရေပေးရေး ထိရောက်ရန် ဂျိုးဖြူ ကန်ရေချိန် လုံလောက်ဖို့လို	ခင်မျိုးသွယ်	| ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၀၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၂၄ မိနစ်	ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ဂျိုးဖြူကန်တွင် နှစ်စဉ် ကန်ရေချိန် လုံလောက်စွာ စုဆောင်းရရှိမှသာ ရန်ကုန်မြို့သို့ရေပေးဝေမှု လုပ်ငန်း ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။“ဂျိုးဖြူကန်ဟာ နှစ်စဉ် မိုးရေချိန်ရရှိမှု နည်းတဲ့အတွက် လုံလောက်တဲ့ ကန်ရေချိန် မရရှိခဲ့ပါဘူး” ဟု နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးစိုးတင့် က ပြောကြားလိုက်သည်။ရန်ကုန်တိုင်း၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁၂) မှ ဦးဆွေအောင်က ဂျိုးဖြူပိုက်အနီးရှိ ကျေးရွာများအတွက် ရေမီတာ တပ်ဆင် ၍ ရေကန်များ တည်ဆောက်ပြီး ၎င်းအိမ်ထောင်စုများအား သောက်သုံးရေ ဖြန့်ဖြူးပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ မရှိမေးမြန်းချက်ကို ဒုဝန်ကြီးက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ အနာဂတ် ရေဖူလုံရေး ဆောင်ရွက်ချက်များအဖြစ် ကုက္ကိုဝမြစ် ရေတင် စီမံကိန်း၊ လှိုင်မြစ် မြစ်ရေတင် စီမံကိန်း၊ ငမိုးရိပ် ဆည်မကြီးမှ ရေပိုက်လိုင်း တိုက်ရိုက်သွယ်တန်းရယူမည့် စီမံကိန်း အား ပြည်တွင်းပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်များ အဖွဲ့ဖြင့် အကြိုလေ့လာမှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။“ရန်ကုန်မြို့ကို ဂျိုးဖြူ ရေလှောင်ကန်က ဂါလံ ၂၇ သန်း၊ ဖူကြီး ရေလှောင်ကန်က ရေဂါလံ ၅၄ သန်း၊ လှော်ကားရေလှောင်ကန်က ရေဂါလံ ၁၄ သန်း၊ ငမိုးရိပ် စီမံကိန်း (ပထမအဆင့်) က ရေလှောင်ကန် ၄၅ သန်း၊ ဒဂုံတောင် အမှတ် (၁ဝ၇) ရေပေးဝေရေး စခန်း၊ ဒဂုံတောင် အမှတ် (၅၄) ရေပေးဝေရေး စခန်း၊ ဒဂုံတောင် အမှတ် (၁ဝ၇)ရေပေးဝေရေး စခန်း၊ စိမ့်ဖြာ ရေစုတွင်းကျယ် ရေပေးဝေရေး စခန်းတွေက ရေဂါလံ ၁ သန်းစီနဲ့ စုစုပေါင်း ရေဂါလံ ၄ သန်း အားနှင့် အဝီစိတွင်းများ (၆၂၄) တွင်းမှ ရေဂါလံ ၁၆ သန်း စုစုပေါင်း ရေဂါလံ သန်း ၁၆ဝ ပေးဝေနေပါတယ်” ဟု မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောကြားသည်။ထို့အပြင် မဟာဝိဇယ ဂါလံ ၁ဝ သန်းဆံ့ ရေလှောင်ကန် ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ရေး အကြိုလေ့လာမှု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ငမိုးရိပ်စီမံကိန်း (ဒုတိယ အဆင့်) လုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးစီးရေးအတွက်လည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ဂျိုးဖြူပိုက်လိုင်းအတွက် ရေတွန်းစက်များ တည်ဆောက်	မြစ်ဆုံမှ ပြောင်းရွှေ့လာသော ရွာသားများ သောက်သုံးရေ အခက်တွေ့နေ	လယ်မြေများ ရေလွှမ်းခံရသော်လည်း ဆန်ဈေးနှုန်းမတက်	ရေကြီးရေလျှံ ထိန်းချုပ်ရန် နိုင်ငံတကာ အကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်	ကဝ မြို့နယ်၏ သုံးပုံတပုံ တလခန့် ရေလွှမ်းနေဆဲ	ရှမ်းပြည်နယ်က လားရှိုးမှာလည်း ရေကြီး	ရေကြီးဒဏ်ခံ ပုသိမ်သားတို့ နေစရာ စားစရာ အခက်ကြုံ	Who is Online
We have 48 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved